NCHETA EFIỌNG GA-ABỤ N’ABALỊ ISII ỌNWA NỌVEMBA NILE – BNYL – hoo!haa!!
Kalaba – Òtù Biafra Nations Youth League (BNYL) ekwuola n’abalị isii nke ọnwa Nọvemba afọ nile ga-abụzị ụbọchị ncheta Ọchịagha Filip Efiọng, onye bụ Osote Ọchịagha Emeka Ọdụmegwu Ojukwu dịka Onyeisiala Bịafra, ma mechaa bụrụkwa Onyeisiala Bịafra.
Efiọng, ochie dike hụrụ Ndigbo nakwa ndị Biafra ndị ọzọ n’anya nke ukwuu nwụrụ n’abalị isii nke ọnwa Nọvemba afọ 2003 n’Aba.
Osote Onyeisi Ọchịchị BNYL ma bụrụkwa Onyeisi ndị Ntorobịa ndị Bakassi a chụpụrụ n’ala ha, Linus Essien kwuru nke a ụbọchị Tọọzdee n’Ịkang, dị n’Okeala Naịjiriya na Kamerun, n’Okpuru Ọchịchị Bakassi nke Krọs Riva Steeti.
Essien kpọkukwara ndị Gọvanọ Ọwụwa Anyanwụ Naịjiriya ka ha nye odogwu agha Bịafra ahụ nkwanye ùgwù dị ọ́kpụ́ maka “mbọ ọ gbara ịhụ na agha kara ìrì ndị Ọwụwa Anyanwụ nile biri”.
Ọ kwara arịrị maka nchefu e chefuru Efiọng n’agbanyeghị mbọ ọ gbara ka Ojukwu gbara ọsọ ndụ.
Cheta na Ọkammụta Filip Efiọng, nta nwa Ọchịagha Filip Efiọng nọrọ n’afọ gara aga na nkuzi o nyere n’ọgbakọ Nkata Ụmụ ibe were kpọọ oku pụrụ iche maka ịdịnotu Ndigbo na ụmụnne ha ndị ọzọ n’Ọwụwa Anyanwụ Naịjiriya (Biafra).
Ọkammụta Efiọng kwukwara na ndị ezinụlọ ha tara oke ahụhụ oge agha Bịafra bere maka na ndị be ha n’Akwa Ịbọm chụpụrụ ha achụpụ maka ihi ihe nna ha mere na Biafra.
N’ezie, Efiọng kwesịrị inye nkwanye ùgwù dị ọ́kpụ́, ọ kacha ugbua nwunye ya ka dị ndụ.
N’ihi, Ndigbo nile nakwa ndị Biafra nile kwesịrị ịkwado BNYL n’ọmalịncha atụmatụ ha nke a. “Ji esighị n’isi puo ome, o si n’ọdụ”
Previous Post: ARA! MAKA FANTA KA NWANNE JI SỤGBUO NWANNE YA
Next Post: Ọ BỤ ỤJỌ MERE ODUMEJE JI RỊỌ ỤMỤ PERICOMO MGBAGHARA?